musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nzvimbo nyowani yeruzivo rwehukama yakatangwa naDiem
Diem, imwe nyowani yemagariro enhau, inotangisa kugadzira madhijitari enzvimbo evakadzi & vasiri-mabhainari vanhu kuti vabatanidze pane zvakajairika nzvimbo dzekufarira, kugadzirisa zvakashata zviitiko zvavanowanzo sangana nazvo pasocial network. Diem's ​​tekinoroji inoshandisa kubatana kwenzanga uye kugovana ruzivo rwechokwadi, tichienda kure nezvakarongedzwa, zvemukati zvemitambo zvatakagadzirirwa kuita pasocial media uye munzira yekuenzanirana, ruzivo rwega apo ruzivo ndiyo fomu yekupedzisira yemari yemagariro.
Diem yanga iri mubeta kubva munaNdira 2021 uye yakaunganidza runyorwa rwevanhu vanopfuura zviuru makumi maviri. Pamberi pekuburitswa kwayo neruzhinji, Diem yakanyatso tarisa pamusoro pe20,000+ "Mauto Ekutanga" kuti vagoverane zvavo zviitiko uye ruzivo rwakakwanirisika nenharaunda dzakakodzera, dzinofarira-mukati mepuratifomu kuburikidza nemafomati anoenderana & asynchronous. Vaya vanhu muDiem vanozokwanisa kutsvaga maHosi kubva kunzvimbo dzakasiyana senge varairidzi vezvemari, vezvemabhizimusi uye maOBGYN. Mauto anosanganisirawo suite yevatungamiriri vanotungamira, vanamuzvinabhizimusi uye maindasitiri anofunga vatungamiriri vanosanganisira Kirsty Godso, Sabia Wade, Lauren Maillian, naJaclyn Johnson, vese avo zvakare vanobatana nekambani Advisory Board kuti vagadzire ramangwana sarudzo yeruzhinji yavanoda kuita. Johnson anogovera, "Ndiri kufara kuHost nekuisa mari muDiem, ndichivaka bhizinesi revakadzi-ini ndinonzwisisa kudikanwa kwenzvimbo dzekuti vanhu vabatanidzane uye nyanzvi munzvimbo yakagadzirirwa ivo."
Imwe yemisimboti yeDiem ndeyekusavaka tekinoroji isingadiwe uye yekupindwa muropa, nekuti iro ramangwana renhau rezvenhau harisi rekuunganidza maziso eziso kuburikidza nekugovana nevamwe. Izvo ndezve kugadzira mapuratifomu ane emhando yemamodheru ayo zvakare anobatsira vanhu vanopa. Mune ramangwana, Diem inoronga kuvandudza pane yechinyakare, maviri-mativi tekinoroji yemasocial network uye harness tekinoroji inowanzo kuwanikwa mumitambo uye AR / VR yekurima zvechokwadi magariro, mativi-matatu enharaunda.
Maitree Mervana Parekh, Investor kuAcrew, anotsanangura, "Nharaunda inotyaira zvinhu zvevanhu, uye tekinoroji yaratidza kugona kwayo kuve chinhu chine simba mukusimudzira izvi. Nekudaro, tekinoroji iyo inoisa pamberi kubatanidzwa uye positivity haina kunge iri pamberi. Ndosaka ndiri kufara nezveDiem. Iri kusundira pamiganhu ye "social network" uye kunyatsogadzira inonyudza, ruzivo rwemagariro kubva pasi kumusoro iyo inogonesa nhengo dzayo kubatanidza, kuchinjana ruzivo, uye kubudirira nenzira ine chinangwa uye inosanganisa. "
Isu tese tinoziva kuti pasocial media ine simba rakakura kune mararamiro atinoita, mashandiro uye kutaurirana, uye zvakadaro, mapuratifomu epamusoro anhasi ese akagadzirwa nevarume. Izvo zvinowanzoreva kuti makambani enhau enhau anotadza kuita zvinokuvadza uye zvebonde, achisiya nzvimbo shoma yevakadzi nevanhu vasiri-mabhainari kuti vavepo mune yepasirese nyika. Nyanzvi yezvemunharaunda, Abadesi Osunsade, anoti, "Semukadzi, mapuratifomu ane mukurumbira munhau akatanga kunzwa achidzvinyirira, achitikurudzira kuva vanotambura munzvimbo dzeveruzhinji nekuda kwekuita. Dhiyabhorosi ndeye munharaunda uye kubatana pasina chakavanzika chirongwa. "
Diem irikubudikira kuruzhinji muna Gumiguru 2021. Chikwata cheNew York-chakavakirwa kambani ndeyeTechstars NYC '20 portfolio kambani, inotsigirwa ne $ 900,000 mu pre-seed mari nekutora chikamu kubva kuXfactor Ventures, Acrew uye ngirozi dzinotungamira dzakadai seGadzira & Gadzira muvambi. , Jaclyn Johnson uye Discord Executive, Amber Atherton.